काे-राेना बिरामीका आँखा बिगार्ने घा-तक कालो ढुसी नेपालमै झन्डै एक दर्जन जनामा देखियाे, कस्ताे छ त सरकारकाे तयारी ? – Annapurna Daily
काे-राेना बिरामीका आँखा बिगार्ने घा-तक कालो ढुसी नेपालमै झन्डै एक दर्जन जनामा देखियाे, कस्ताे छ त सरकारकाे तयारी ?
On Jun 3, 2021 63
को-भिड-१९ भएका बिरामीमा आँखा बिगार्ने (म्यूकोर्माइकोसिस) एक प्रकारको कालो ढुसीको सङ्क्रमण नेपालमा अहिलेसम्म झन्डै एक दर्जन मानिसमा पुष्टि भएको विवरण आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।
दश दिनअघि मन्त्रालयले तीन-चार जनामा उक्त घा-तक कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखिएको बताएको थियो। “विभिन्न ठाउँबाट गरी अहिलेसम्म हामीकहाँ म्यूकोर्माइकोसिसका करिब १२ वटा रिपोर्टिङ भएका छन्,” नवनियुक्त प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सोमवार भने । उनका अनुसार वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाण्डूलगायत ठाउँका अस्पतालबाट कालो ढुसीको सङ्क्रमणका विवरणहरू आएका हुन् ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपालमा सुरुमा सीमावर्ती सहर वीरगन्जबाट कालो ढुसीको सङ्क्रमणबारे मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गरिएको थियो । त्यसयता निगरानी थालेको मन्त्रालयले उक्त ढुसीको सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारबारे ‘प्रोटोकल’ बनाएर सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको उनले बताए । नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी नेपालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सङ्गठनले भने रोकथाम र व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा एड्भाइजरी प्रकाशित गरिसकेको छ ।
“विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको एउटा को-र टीम बनाएर हामीले प्रीभेन्शन (रोकथाम) र ट्रीट्मन्ट (उपचार) बारे प्रोटोकल नै बनाएका छौँ र त्यसलाई सर्भेलन्समा राख्ने भनेका छौँ,” डा. पौडेलले थपे । चिकित्सकहरूका अनुसार कालो ढुसीबाट सङ्क्रमितको उपचारमा मुख्यतया ‘एम्फोटेरिसिन बी’ औषधिको प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
नेपालमा त्यो औषधिको प्रयोग कालाजारको उपचारमा हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म बजारमा उपलब्धबाट काम चलाइँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय भा-र-तले निर्यातमा रोक लगाइदिएपछि समस्या देखिएको प्रवक्ता पौडेलले उल्लेख गरे । “त्यो औषधिको उपलब्धता अहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। हामीसँग अलि कम नै छ । हामीले डब्ल्यूएचओको संयन्त्रबाट माग गरेका छौँ जुन महिनाको २ तारिखसम्म आइपुग्ने कुरा छ।”
कालो ढुसी पनि भनिने म्यूकोर हाम्रो वातावरणमा प्राकृतिक रूपमै पाइने एक प्रकारको ‘अवसरवादी’ ढुसी हो जसको सङ्क्रमणबाट म्यूकोर्माइकोसिस हुन्छ । काठमाण्डूको तिलगङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ अफ्थ्याल्मलजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कोर्निआ विशेषज्ञ डा. रीता गुरुङका अनुसार मानिसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका बेला म्यूकोर्माइकोसिस हुने गर्छ । बिबिसी बाट साभार गरिएकाे